Kusvira SHELLY kaCollege Student - Ndakamuzvambura Nayo muShower - Page 4 of 4 - Masasi eHarare
Shelly akabva ati if you don’t mind ndikweshewo musana achivhura the curtain imi kumovie hapana chandainge ndawona, mwana ainge akazara bathfoam muviri wese mazamu acho imi kumira se orange , ndakabva ndati let me remove my jean ndisatote. Ndichibvisa jean ndakabva ndabatanidza nepant, Shelly akazviona asi haana zvakataura ndakapinda mushower ndikatanga kumukwesha kumusana ndichiguma guma magaro nemboro yangu yainge yatomira kare.
Akaita kakuvhunduka asi ainge atori nezemo just like me , akanditarisa tikatanga kukisana tichirohwa hedu nemvura slowly apa mboro yangu yainge yakuvhita vhita uchinyatsonzwa kuti ropa rese raungana pamusoro wemboro. Muviri waShelly wainge wakazara foam uchitsvedzerera zvanakidza, ndangosimudza gumbo rake one iye akabatirira pashower ndokuipfekedzera slowly iri nyoro, mwana akaita imwe rhythm yandisati ndamboona zvekuiti dai simbi yeshower isina kusimba musi uyu yaityoka.
Haana kana kutora nguva ndokubva atunda ipapo inini was still far, hazvina kuperera ipapo takabuda mushower ndikamubatisa tub ndikaita zvekupfugama pasi ndichipomba beche, ndakasvira ndikapomba zvinesimba nespeed ndikabva ndanzwa huronyo huchiuya ndiye tsaaaa tsaaaa tsaaaa.
Takadzokera mushower just to rinse off and tikaenda kubedroom, tichingopedza kuzora mafuta mboro yangu yainge yatomira again ndikabva ndamupamhazve… Shelly akapa kutenda zvekuti patakazodya breakfast ainge ava nenzara zveshuwa and aida kudzora energy nekuti ainge apera simba nekusvirwa zvekuti voice rake raitoita kunge rapera nekuchemerera.